တောင်တရုတ်ပင်လယ် တွင် တရုတ်သင်္ဘော နှစ်စင်းက ဗီယက်နမ် သင်္ဘောကို တိုက်ခိုက်နှစ်မြှုပ် – Let Pan Daily
တောင်တရုတ်ပင်လယ် တွင် တရုတ်သင်္ဘော နှစ်စင်းက ဗီယက်နမ် သင်္ဘောကို တိုက်ခိုက်နှစ်မြှုပ်
တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်အတွင်းမှာ ဗီယက်နမ် ငါးဖမ်းသင်္ဘောကို တရုတ် သင်္ဘောနှစ်စင်းက တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ဖမ်းဆီးရမိထားသော ငါးတွေနဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာတွေကို သိမ်းဆည်းသွားတယ်လို့ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောပါတယ်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ဇွန် ၁၀ ရက်မှာ တောင်တရုတ် ပင်လယ်ပြင်အတွင်းရှိ ပါရာဆယ်ကျွန်းစုအနီးမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံဟာ ပါရာဆယ်ကျွန်းစုအပါအဝင် တောင်တရုတ်ပင်လယ်တစ်ခုလုံးနီးပါးကို ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အခိုင်အမာ ကြေညာ ထားပါတယ်။
ဗီယက်နမ်အပါအဝင် အခြားနိုင်ငံတွေ ကလည်း ကျွန်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ ပြောကြားထားပြီး နိုင်ငံအများအပြား အငြင်းပွားမှု ဖြစ်နေကြတဲ့ ကျွန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီယက်နမ်ငါးဖမ်းသင်္ဘော နစ်မြုပ်သွားနိုင်ခြေရှိတဲ့ အဲ့ဒီမတော်တဆမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ တရုတ်နိုင်ငံ ကို ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ က တိုက်တွန်းထားတယ် လို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန် ထားပါတယ်။
The Indonesian navy scuttles foreign fishing vessels caught fishing illegally in Indonesian waters near Bitung, North Sulawesi May 20, 2015 in the is photo taken by Antara Foto. A total of 19 foreign boats from Vietnam, Thailand, Philippines and one from China were destroyed near Bitung as part of an ongoing crackdown by the Indonesian government on illegal fishing.
ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. MANDATORY CREDIT. INDONESIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN INDONESIA. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS
ဧပြီလအတွင်းကလည်း မတော်တဆမှု တစ်ခုကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံကို ဗီယက်နမ်နိုင်ငံက ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီး ဗီယက်နမ်ငါးဖမ်း သင်္ဘောတစ်စင်းဟာ တရုတ်ရေကြောင်း ထောက်လှမ်းရေးသင်္ဘောတစ်စင်းနဲ့တိုက်မိကာ နစ်မြုပ်သွားခဲ့ ပါသေးတယ်။
တောငျတရုတျပငျလယျ တှငျ တရုတျသင်ျဘော နှဈစငျးက ဗီယကျနမျ သင်ျဘောကို တိုကျခိုကျနှဈမွှုပျ
တောငျတရုတျပငျလယျပွငျအတှငျးမှာ ဗီယကျနမျ ငါးဖမျးသင်ျဘောကို တရုတျ သင်ျဘောနှဈစငျးက တိုကျခိုကျခဲ့ပွီး ဖမျးဆီးရမိထားသော ငါးတှနေဲ့ ပစ်စညျးကိရိယာတှကေို သိမျးဆညျးသှားတယျလို့ ဗီယကျနမျ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနက ပွောပါတယျ။
အဆိုပါ ဖွဈစဉျဟာ လှနျခဲ့တဲ့ ဇှနျ ၁၀ ရကျမှာ တောငျတရုတျ ပငျလယျပွငျအတှငျးရှိ ပါရာဆယျကြှနျးစုအနီးမှာ ဖွဈပှားခဲ့တာလို့ သိရပါတယျ။ တရုတျနိုငျငံဟာ ပါရာဆယျကြှနျးစုအပါအဝငျ တောငျတရုတျပငျလယျတဈခုလုံးနီးပါးကို ပိုငျဆိုငျကွောငျး အခိုငျအမာ ကွညော ထားပါတယျ။
ဗီယကျနမျအပါအဝငျ အခွားနိုငျငံတှေ ကလညျး ကြှနျးတှကေို ပိုငျဆိုငျတယျလို့ ပွောကွားထားပွီး နိုငျငံအမြားအပွား အငွငျးပှားမှု ဖွဈနကွေတဲ့ ကြှနျးတှေ ဖွဈပါတယျ။ ဗီယကျနမျငါးဖမျးသင်ျဘော နဈမွုပျသှားနိုငျခွရှေိတဲ့ အဲ့ဒီမတျောတဆမှုနဲ့ပတျသကျပွီး စုံစမျးစဈဆေးမှုတှပွေုလုပျဖို့ တရုတျနိုငျငံ ကို ဗီယကျနမျနိုငျငံ က တိုကျတှနျးထားတယျ လို့ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနက ထုတျပွနျ ထားပါတယျ။
ဧပွီလအတှငျးကလညျး မတျောတဆမှု တဈခုကွောငျ့ တရုတျနိုငျငံကို ဗီယကျနမျနိုငျငံက ကနျ့ကှကျခဲ့ပွီး ဗီယကျနမျငါးဖမျး သင်ျဘောတဈစငျးဟာ တရုတျရကွေောငျး ထောကျလှမျးရေးသင်ျဘောတဈစငျးနဲ့တိုကျမိကာ နဈမွုပျသှားခဲ့ ပါသေးတယျ။
“တဖြည်းဖြည်း နီးကပ် လာတဲ့ တောင်တရုတ် ပင်လယ် က စစ်ပွဲ” …
ကင်ဂျုံအန် တောင်ကိုရီးယား အပေါ် ဒေါသူပုန် ထရတဲ့ အကြောင်း အရင်း (အဖြစ် အပျက်က ဒီလိုပါ)